आज ८:४२ देखि सूर्य ग्रहण, के गर्नु हुन्छ के हुँदैन ? « Kakharaa
आज ८:४२ देखि सूर्य ग्रहण, के गर्नु हुन्छ के हुँदैन ?
१० पुस, काठमाडौं । आज बिहीबार खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दै छ । नेपाली समय अनुसार बिहान ८ बजेर ४२ मिनेटमा शुरू हुने ग्रहण ११ बजेर ३१ मिनेटमा समाप्त हुनेछ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार सूर्यग्रहण पश्चिम र दक्षिणको बीच तर्फबाट स्पर्श भई पूर्व र दक्षिणको बीचमा पुगेर मोक्ष हुनेछ । यो खण्डग्रास सूर्यग्रहण नेपाल, भारत, श्रीलंक लगायत एसियाका सबै तथा हिन्दमहासागर, मलेशिया, पूर्वी युरोप, उत्तररपश्चिम अस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रिकालगायत विश्वका अधिकांश ठाउँबाट देख्न सकिने जनाइएकाे छ ।
ग्रहण लाग्नु केही समय अगाडिदेखि ग्रहण बार्नुपर्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ । जसअनुसार आज (बुधबार) राति ८ः४२ देखि सुतक लाग्ने छ । यो समयमा बालक, बृद्ध, रोगी तथा गर्भवती महिलाबाहेक अरूका लागि भोजन निशेध हुने ज्योतिषीय मान्यता छ ।
ज्योतिषीय मान्यता अनुसार राशि अनुसार सूर्य ग्रहण नजर गर्दा लाभ वा हानी हुनसक्नेछ । १२ राशिका लागि सूर्य ग्रहणको फल यस प्रकार बताइएको छ ।